को होलिन् यी दुई वर्षीया अवोध बालिका ?
समाचार अन्तर्वार्ता समाज
शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, २० फागुन
‘चार दिनदेखि बोल्नै छाडेकी छन् । भोक लाग्दा कपडा तान्छिन् । कति पटक नाम सोध्छौँ तर केही नै बोल्दिनन्’, सऊद आलम बोल्दाबोल्दै बीचमै रोकिन्छन् र आफ्नी पत्नीलाई अह्राउँछन्, ‘ओए, मस्जिदमा याे बच्चीका लागि कपडा पाइयो भने लेरा’उनू ।’
सामुन्ने सिँढीमा बसेकी बच्ची केही बोल्दिनन् । आफ्नो फ्रकमा लगाइएका तारा उप्काउने प्रयास गर्दा जब उनका कलिला हात थाक्छन् तब साना खुट्टाले अग्लाअग्ला सिँढी नाप्ने कोसिस गर्न थाल्छिन् । उनी को हुन् कसैलाई थाहा छैन । उनको बुवाको नाम के हो, कहाँबाट यहाँ आइपुगिन्, सबै अनभिज्ञ छन् । बस उनको उमेर मात्र अन्दाज लगाउन सकिन्छ, उनी दुई/अढाइ वर्षकी हुन् ।
मंगलबार, २५ फेब्रुअरीमा जब उत्तर पूर्वी दिल्लीस्थित शिव बिहारमा हिंसा भड्कियो तब यसको शिकार बनेका (प्राय मुस्लिम) आफ्नो घर र वर्षौँको कमाइ छाडेर भागे । यस क्रममा सऊद आलम र मोहम्मद सलामको परिवारले शिव बिहारस्थित भाडाको घर छोडे । उनीहरू ज्यान बचाउन सडकमा निस्किए । सऊद आलाम भन्छन्, ‘तोडफोड र हिंसाका बीच यहीँ मदीना मस्जिद नजिकै रुँदै गरेकी अन्दाजी दुई वर्षकी बच्चीलाई देखेँ । उनको आसपास कोही थिएन । उनको टाउकोमा चोट लागेको थियो, उनी रोइरहेकी थिइन् ।’
सऊद आलमले आफ्नो परिवारसँग बाहिर निस्किँदा एक्लै बच्चीलाई हिंसा भइरहेको सडकमा रुँदै गरेको देखेपछि आफ्नो साथमा लिएर आए ।
उक्त समय सऊद आफ्नो परिवार र नातेदारसँग बाबूनगरको एक घरमा शरण लिएर बसिरहेका थिए । पछिल्लो पाँच दिनदेखि यी बच्ची उनीहरूकै साथमा छिन् । तर, उनको आमाबुवा को हुन्, कहाँ गए र कसरी भेटिएलान् यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
हाम्रो परिचयको कागज पनि जल्यो
दिल्लीमा हिंसाको आगो केही कम भएपछि मान्छेहरू आफन्तको खोजीमा निस्किएका छन् । सोमबार र मंगलबार घरबाट निस्किएका कतिपय मानिस कहाँ छन्, मारिए वा बाँचे, कसैलाई थाहा छैन । तर, यी दुई वर्षीया बच्चीको अवस्था त्योभन्दा दयनीय छ । उनी यति सानी छन् कि आफ्नो नामसमेत थाहा छैन ।
बिहारको अररिया जिल्लामा बस्ने आलम १०–१२ वर्ष पहिले जागिरको खोजीमा दिल्ली आएका थिए । पेसाले नाली सफाइको काम गर्ने सऊद आलम मंगलबारसम्म आफ्नी पत्नी र एक छोरासँग शिव बिहारमा भाडाको घरमा बस्थे तर आज उनी बेघर छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मंगलबार साँझ ६ बजे हाम्रो क्षेत्रमा हंगामा सुरु भयो । एकाएक गल्लीमा भीडभाड भयो । त्यो भीडबाट मानिसहरूले नारा लगाउन थाले । म परिवारका साथ भागेर छतमा गएँ । प्रदर्शनकारीले नजिकैको छतबाट सिलिन्डरमा आगो लगाएर फ्याँकिरहेका थिए । जल्दै गरेको सिलिन्डर हाम्रो घरको छतमा पनि खस्यो । मेरा बच्चाहरू रुन थाले । रड र डण्डा बोकेर आएकाे भीडबाट मानिसहरूले हामीलाई भने– तुरुन्त भाग, नत्र मर्छौ ।’
उनले सम्झिए, ‘पेस्तोलको आडमा हाम्रो गोजीमा हात हालेर पैसा निकाले । अब हामीले आफ्नो पहिचान के बताउनु, हामीसँग त आधार कार्डसम्म छैन बस ज्यान बचाएर पैदल नै यहाँ आयौँ । यिनी पनि हामीजस्तै परिवारको बच्ची हुन सक्छिन् । यही सोचेर मैले यिनलाई यहाँ ल्याएँ ।’ सऊदलाई प्रहरीले न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास छैन । उनी भन्छन्, ‘११२ र १०० नम्बरमा फोन गर्दा पुलिसले १० मिनेटमा आउने जवाफ दिए पनि अहिलेसम्म आएन ।'
मंगलबार राति नै सऊद आलम आफ्नो परिवार र एक नातेदारसँग चमन पार्क पुगे जहाँ शिव बिहारबाट आउने मुसलमान परिवार शरण लिएर बसिरहेका छन् ।
तर, त्यहाँ उनले बस्ने ठाउँ पाएनन् । यतिबेला उनी बाबूनगरस्थित एक घरमा बसिरहेका छन् ।
‘जाडोको समयमा कम मूल्यमा फ्रिज किनेको थिएँ’, आँखाभरी आँसु पार्दै उनी भन्छन्, ‘तर उनीहरूले मेरो केही बाँकी राखेनन्, सबै घर नै जलाइदिए, फ्रिज के बचेको होला र !’
मानिसभित्र डर भरिएको छ । केही इदगा र केही मानिसले आफ्नो घरको ढोका सऊदजस्ता पीडितका लागि खोलिदिएका छन् । यहाँ सयौँ मानिस बसिरहेका छन्, कति छन् भन्ने यकिन विवरण छैन ।
भागाभागको माहोल छ । बाहिरबाट आएका महिलालाई देख्नेबित्तिकै मान्छेहरू एकै खालका प्रश्न गर्छन्, ‘तपाईं डाक्टर हो ?’, ‘म्याडम केही खानेकुरा बाँडिरहनु भएको छ ?’
सवाल यो पनि छ कि दंगापीडित मानिसहरू दिल्ली सरकारको राहत शिविरहरूमा किन गइरहेका छैनन् ?
केही मानिस इदगाहहरूको एउटा कोठामा बसेर आफ्ना दुःखका दिन सम्झिरहेका छन् । तर, रुँदै गरेकी यी दुई वर्षकी बच्चीलाई केही थाहा छैन, उनीमाथि के बितेको छ । उनलाई थाहा छैन, यी नचिनेका मानिसहरू को हुन् र किन उनीसँग भेट्न आइरहेका छन् । (बीबीसी हिन्दीबाट)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २०, २०७६, ०६:५२:००
कोभिड – १९ : सेनाको सहयोगमा क्वारेन्टाइन निर्माण